पबित्र पशुपति क्षेत्रमै यस्तो अश्लील हर्कत ! को हुन र किन ? «
पबित्र पशुपति क्षेत्रमै यस्तो अश्लील हर्कत ! को हुन र किन ?
प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७५, आईतवार ०९:३६
काठमाडौं । मुलुककै पवित्र धार्मिकस्थल पशुपति क्षेत्रमा गजेँडी बाबाहरुको बसोबास रही आएको छ । केही समय अगाडि त गाँजा सेवन गर्ने युवायुवतीहरु बाबाबाट कारोबार गर्ने तथ्या बाहिरिएका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पहल र महानगरीय प्रहरी परिसरले गजेँडी बाबा र युवायुवतीहरुलाई तह लगाउने अभियान थालेको थियो । केही हदसम्म कारोबार कम भएतापनि लुकीछिपी धन्दा चलिरहेकै सार्वजनिक भएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको सक्रियता घटेको हो की भन्ने त्यहाँ आवातजावत गर्ने दर्शनार्थीको आँकलन छ । मुलुककै पवित्र स्थानहरुमा हुने यस्ता घटनाले त्यस ठाउँको गरिमालाई असर गर्ने चिन्ता एकातिर छ भने बढ्दै गएको अराजक शैलीले ठूलो रुप लिने अर्को चिन्ता । भर्खरैमात्र सार्वजनिक गाडीमा एक युवकले गरेको अश्लिल हर्कतको आरोपीलाई प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । प्रहरीका मुखैमा देखिने यस्ता घटनाहरुमा प्रहरीको ‘एक्सन’ नै कमजोर भएको हो की ? (जनातासमाचारमा लेखिएको छ)